Super EQ S1, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa | Androidsis
Anyị na -alaghachi na nyocha na ekweisi ikuku Bluetooth. Mana oge a anyị na -ewetara gị ihe nlereanya nwere usoro “karịrị ntị”, ma ọ bụ ihe bụ otu, ekweisi na -ekpuchi ntị kpamkpam, Nnukwu EQ S1. Igwe isi ekweisi nwere nha zuru oke maka ndị na -achọ itinye onwe ha na egwu ndị na -ege ntị.
Site n'aka OneOdio, ụlọ ọrụ nke anyị nweburu ike nyochaa ngwaọrụ dị iche iche metụtara ụda. Kedu maka ụdị ngwaahịa Super EQ nke anyị na -ahụ ihe nlereanya a nke anyị ga -agwa gị ihe niile. A nnọọ doro anya ihe atụ na nwere ngwaọrụ dị mma nwere ezigbo arụmọrụ ọ dịghịzi mkpa imefu nnukwu ego.
1 Super EQ S1, karịa ka a tụrụ anya ya
2 Igbe mbupu Super EQ S1
3 Nhazi nke Super EQ S1
4 Atụmatụ Super EQ S1
Super EQ S1, karịa ka a tụrụ anya ya
Inyocha isi ekweisi Super EQ S1 site n'otu isi, anyị nwere ike ịhụ ka ihe anyị na -ekwu na anyị nwere ngwaahịa dị mma bụcha eziokwu. Obi abụọ adịghị ya, ihe mbụ pụtara ìhè bụ nke ya ọdịdị ahụma a nnọọ ọma nwetara imewe. Isi ihe abụọ na -eme ngwaahịa a na -enye a Foto "adịchaghị" na -enweghị ihe ọ bụla iji nwee anyaụfụ ruo n'ọkwa kachasị elu.
Mana ọ bụghị naanị akụkụ anụ ahụ bụ isi ihe dị iche na Super EQ S1 ndị a. Nkà na ụzụ nke ejiri ya, yana arụmọrụ nke ahụ nwere ike ịnye onye ọrụ mee ya ka ọ bụrụ otu nhọrọ kacha atọ ụtọ n'oge a. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụahịa ọnụahịa nke ha na -akwaga. Ugbu a ị nwere ike ibudata gị Nnukwu EQ S1 na ọnụahịa kachasị mma na weebụsaịtị gọọmentị.
Igbe mbupu Super EQ S1
Oge na -abịa ịhụ ihe dị na igbe ahụ nke ekweisi Super EQ S1. Oge a, anyị emeela igbe mbata ugboro abụọ ebe anyị natara nkeji ekweisi abụọ na agba abụọ dị. Anyị nwere ekweisi, na -abata apịaji anyị ga -ewepụkwa ka anyị nwee ike idowe ha n'ọnọdụ "nkịtị".
Anyị nwekwara otu ụzọ, ha abụọ dị mkpa. Ndị chaja nja batrị, ya na Ụdị USB USB. Na a 3.5mm eriri USB iji nwee ike jikọọ ekweisi na ngwaọrụ ọ bụla nwere ọdụ ụgbọ mmiri a ma ọ bụrụ na batrị gwụchara. Anyị nwekwara nkọwa sitere na onye nrụpụta n'ụdị akpa ebu ọ dịkwa mfe imeghe.
Ma ọ bụghị ya, igbe Super EQ S1 nwere naanị akwụkwọ ngwaahịa kpochapụwo, nkenke ndu eji na akwụkwọ ndị metụtara ya nkwa.
Nhazi nke Super EQ S1
Na ngwaahịa a na -ahụ anya dị ka ekweisi, nke nwekwara oke nha, imewe na -aghọ isi. Ngwa nke onye ọ bụla ga -ahụ mgbe anyị na -eji ha eme ihe n'èzí ga -adọrọ mmasị, ma ọ dịkarịa ala maka ndị zụrụ ya. Anyị ahụla isi ekwe ntị n'ụdị dị iche iche, nha na agba dị iche iche ma anyị nwere ike ikwu nke ahụ Super EQ S1 dị na ọnọdụ nwere uche.
na Nnukwu EQ S1 na ọnụahịa kachasị mma na weebụsaịtị OneOdio
Anyị na-achọta atụmatụ nke na -enweghị mmasị na -adọrọ mmasị n'anya. Anyị enweela isi ọma inwe na nwalee agba abụọ dị; oji na oji. Na n'etiti ha, ewezuga agba agba, ha nwere otu akụkụ yana akụkụ dị iche na ha.
Igwe isi ọcha Ha nwere otu agba na ihe akpụkpọ anụ nke na -ekpuchi ụfụfụ na akwa isi. Mana akụkụ okirikiri nke fọdụrụ na mpụga ekweisi ka ejiri ọlaọcha mechie. Otú ọ dị, ekweisi ojii ha na-edebe otu agba n'ime ahụ mpụta niile. N'ọnọdụ abụọ ahụ, n'ime ihe mkpuchi isi Emechara ya na a njirimara agba uhie emeputa.
Anyị chọtara otu ihe mkpuchi isi nke enwere ike ịgbatị ya mere enwere ike iji ya ọbụna isi.
Na ntị ntị aka nri anyị hụrụ ahụ bọtịnụ anụ ahụ na-ejere ya ozi njikwa ọkpụkpọ egwu. Anyị nwekwara ike iji ha zaa ma ọ bụ jụ oku ekwentị. Na ntị aka ekpe bụ odori mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, na Micro USB usoro. Ọzọkwa ebe a bụ microphones na ọdụ ụgbọ mmiri 3,5 mini iji jikọọ analog cable ọdịyo.
Kedo akwa ekweisi kwesịkwara ka a kpọtụrụ ya aha pụrụ iche. Emere ya na eụfụfụ dị nro nke na -eme ka ahụ anyị dị mma. Ha na -enwetaghachi ọdịdị ozugbo. Ha wee kechie ihe onwunwe "Poly-akpụkpọ anụ" ịdị mma Dị elu. Na ekele maka oghere ndị a na -ahụ anya, ha na -enye ọmarịcha "elu".
Atụmatụ Super EQ S1
Oge erugo ịgwa gị ihe niile Super EQ S1 na -echere anyị. Anyị ga -ebido site na -ekwu maka kagbuo mkpọtụ mkpọtụ. Otu n'ime ihe ndị a na -achọkarị na ụdị ekweisi ọ bụla nke oge a. Super EQ S1 bụ a kwadebere ya ruo igwe okwu anọ nwere ihu abụọ maka ahụmịhe ịkagbu mkpọtụ ịtụnanya nke ruo 33 decibel.
Na mgbakwunye na kagbuo mkpọtụ mkpọtụ dị egwu, ha na -egosipụtakwa ọnọdụ nghọta. Anyị na -ekwu okwu n'etiti ụzọ ebe na mgbakwunye na ịge egwu gị nke ọma na olu ahọrọ, anyị nwere ike gee ihe gbara anyị gburugburu na -enweghị nsogbu. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ị bea ntị ma ọ bụrụ na ha agwa anyị okwu n'ọfịs, ma ọ bụ mgbe anyị na -agafe mpaghara okporo ụzọ, wdg. Ọ bụrụ na ekweisi ndị a bụ naanị ihe ị na -achọ, nweta nke gị Nnukwu EQ S1 ọnụahịa kacha mma.
Otu ozi dị mkpa mgbe ọ bụla anyị na -ekwu maka ngwaọrụ "ịga" bụ nnwere onwe na ngwaahịa a nwere ike ịnye. N'ihe banyere ekweisi Super EQ S1 anyị na -ekwu maka ohere nke enweghị nkwụsị nke ihe ruru awa 45. Obi abụọ adịghị ya, karịa ọnụọgụ zuru ezu iji chefuo ibu gị kpamkpam n'oge ngwụcha izu, dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụghị ekweisi niile nha a nwere ekwe omume nke mpịachi. Enwere ike apịaji Super EQ S1 site na iko ntị ọ bụla ka ọ were obere akara ukwu. Zuru oke itinye ha n'ime akpa njem nke anyị na -ahụ n'ime igbe yana na ha na -abụkarị akụkụ nke nnukwu akpa anyị. Kedu ihe ọzọ, sponge nke jupụtara na mpe mpe akwa na -eme ka ojiji ya adịghị enye nsogbu ma ọ bụ pịa na ergonomics nke na -atụgharị n'ime ahụmịhe onye ọrụ nwere ntụsara ahụ.
Anyị enweghị ike ichefu banyere njikọta nke S1 ndị a nke Super EQ nke OneOdio nwere. Anyị nwere njikọ Bluetooth 5.0, ihe na -ekwe anyị nkwa mgbaama n'akwụsịghị akwụsị. Ma anyị nwekwara enwere ike ijikọ ma jikọọ ekweisi anyị n'otu oge yana ihe ruru ngwaọrụ abụọ dị iche iche. Ihe na -eme dị mma nke ukwuu.
Super EQ site na OneOdio
Nhazi N'elu ntị
Agba Nwa na ọcha
Njikọ Bluetooth 5.0 ruo ngwaọrụ 2 n'otu oge
Bịa 1o mita
Onwe ya Awa 45
Nkagbu Canti Ngwakọ na mbenata ihe ruru 33 dB
Akụkụ X x 17 15 14 cm
Ibu ibu 300 g
Ahịa 51.95 €
Linkzụta njikọ Nnukwu EQ S1
Anyị na -ekele ụda dị mma nnukwu bass na kagbuo mkpọtụ.
El imewe na ihe nke ọma karịa oke ọnụ ahịa.
Gụọ na elu Oge 45 jiri ha bụ nnukwu mgbakwunye.
Super Bass na ANC
Igwe isi ekwe ntị dị ka dị mfe nsị.
USB chaja na Ụdị USB USB anya akara ụbọchị.
Nchaji eriri USB
Nnukwu EQ S1
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Super EQ S1, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Otu esi ehichapụ ozi na akaụntụ gị na Messenger